Doorashada Hindiya: Haweeney Si Weyn Uga Guulaysatay Ra'iisal Wasaare Modi
Monday May 03, 2021 - 10:19:39 in Wararka by Burco Office 2
Mamata Banerjee ayaa si weyn u dhaliisha ra'iisal wasaare Narendra Modi
Ra'iisal wasaare Narendra Modi ayaa lagu dhaliilay inuu xoogga saaray doorashada gobollada halkii uu wax ka qaban lahaa cudurka safmarka ah ee Covid-19, kas oo fara ba'an ku haya Hindiya.
Ra'iisal wasaare Modi iyo wasiirkiisa arimaha gudaha ee marar badan khudbado u jeediyay dadweynaha Galbeedka Bengal, waxaana mas'uuliyiintaas lagu eedeeyay inay doorashada ka doorbideen xakameynta cudurka.
Ugu yaraan 12 bukaan ah oo uu kamid yahay dhakhtar ayaa ku geeriyooday cisbitaal caan ah kadib markii ay Sabtidii ka go'day oksijiinta.
Mid kamid ah dhakhaatiirta Hindiya ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay mid argagax leh. "Marka uu cisbitaalka isticmaalo keydkiisa oksijiinta ah, ma jirto meel kale oo uu ka helayo oksijiin dheeraad ah," ayuu yiri dhakhtarka.
Caasimadda Delhi ayaa ah meesha uu sida ba'an u saameeyay xanuunka, waxaana Axadii oo keliya laga diiwaangeliyay in ka badan 25,000 oo kiis, halka dhimashadana ay gaartay 412 qof.